चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङबाट स्वागत
बेइजिङ, १४ वैशाख । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि दोस्रो क्षेत्र तथा मार्ग मञ्च’मा शनिबार (आज) सहभागी हुन आएका विभिन्न मुलुकका सरकार तथा
एउटा अण्डाको कति पर्छ ? वीर अस्पतालले किन्यो १ पैसामा अण्डा, १ रुपैयामा विस्कुट
काठमाडौं, १४ वैशाख । अहिलेको बजार भाउअनुसार एक पैसामा अण्डा किन्न पाइन्छ ? चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गतको वीर अस्पताल खरिद इकाइले पत्याउनै नसकिने भाउमा खाद्यान्न गरिद गरेको भेटिएको
नेपालमा दुई महिनाभित्रै आउँदैछ पाइपलाइनबाट पेट्रोल
काठमाडौं , १४ वैशाख । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) को सहयोगमा निर्माणाधीन मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइन दुई महिनाभित्रै सम्पन्न हुन लागेको छ । आईओसीको बिहार पाइपलाइन परियोजना हेर्ने महाप्रबन्धक एनके पण्डाका अनुसार
खुलामञ्च अतिक्रमण : सम्झौतामै किर्ते गरी संरचना निर्माण गर्न पाइने उल्लेख
काठमाडौं , १४ वैशाख । राजधानीको खुलामञ्च कब्जा गर्ने जलेश्वर–स्वच्छन्द–बिकोई बिल्डर्स प्रालिले काठमाडौं महानगरपालिकासँग गरेको सम्झौतामा किर्ते भएको फेला परेको छ । महानगरपालिकासँग भएको सम्झौतापत्रमा ‘२०७३ वैशाख १३ मा स्वीकृत
बनेपा । सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नं ३ ले चार जिल्लाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि स्वरोजगार तथा सीपमूलक मोबाइल मर्मत तालीम काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा शुरु गरेको छ । विभिन्न प्रकारका अपाङ्गता
काभ्रेपलाञ्चोक । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले तीन वर्षभित्र सामुदायिक शिक्षा परिमार्जन गरी गुणस्तरीय बनाइसक्ने दाबी गर्नुभएको छ । एशियाली विकास बैंक ९एडीबी०को रु छ करोड ऋण सहयोग तथा
चितवन, १३ वैशाख । महाभूकम्प गएका क्षेत्रमा दशौँ वर्षसम्म परकम्पन आइरहने विज्ञले जनाएका छन् । नेपालको भूकम्पीय जोखिम र भूकम्पीयतामा विद्यावारिधि गरेका प्रा।डा हरिहर पौडेलका अनुसार यसकै निरन्तरताका रूपमा नेपालमा